Bing Na Na Na! | Martech Zone
Microsoft na-eji Google were isi na okwu ejiri ya na ọchụchọ yana Google = mkpa. Nke a bụ azụmaahịa izizi nke Microsoft na-agba.
Enwere m olileanya n'ezie na Microsoft nwere ike iji Google maa aka ike Bing. Maka ụbọchị ole na ole gara aga, ejiri m ya dị ka igwe nchọgharị m, ma ana m enweta nsonaazụ dị mkpa - nke ahụ bụ aha egwuregwu ahụ.
Na-ele anya na ụlọ ọrụ na-ere ahịa search engine, Google emeela ezigbo ọrụ nke ịkọwapụta ihe ọchụchọ bụ mana gbanwee omume anyị na nnabata anyị ogologo oge. Anyị niile na-etinye uche ugbu a na njikọta isiokwu - anyị na-anwa ma gbalịa mgbe anyị na-enwetaghị nsonaazụ. N'akụkụ nke ọzọ, ụlọ ọrụ njikarịcha njin ọchụchọ na-achọ ịme egwuregwu sistemụ na mkpọsa backlinking kama ịnwe ka ụlọ ọrụ ha dee ọdịnaya dị egwu. Backlinking na-agbagọ mkpa na Google ma mee ka ọ ghara ikwe omume ụfọdụ nsonaazụ kacha mma iji nweta ebe kachasị mma.
N'otu aka, m ghọtara na okwu ndị mmadụ na-achọ na ndi okwu azumahia kwesiri iji choputa ha; agbanyeghị, ọchụchọ ga-eji nwayọ nwayọ gbanwee ma merie nsogbu ndị ahụ. Ọ bụrụ na m chọọ nnukwu eze, gịnị kpatara na anaghị etinye m na peeji nsonaazụ yana ndị dọkịta ezé gbara m gburugburu nwere ezigbo nyocha site na isi mmalite ụfọdụ gaa n'usoro # 1?
Kama, Naanị m na - ahụ akwụkwọ ndekọ aha, ndị dọkịta ezé mba họọrọ n'ihi na ha jiri Keywords na isiokwu peeji ha, ọdịnaya, na backlinks. Nke ahụ abụghị nzaghachi dị mkpa. (Bing adịghị akụ ya, kwa). Kedu otu o siri sie ike itinye a geographic-IP nchekwa data na ma jikọta nsonaazụ ọchụchọ na ụfọdụ ndị mpaghara, kwa?
Oge eruola mgbe nchọta ahụ bịara mara ihe, enwere m olile anya na asọmpi dị n'etiti Bing na Google meziwanye nchoputa ihe nyocha na intaneti.
Tags: bingazụmahịa bingmicrosoftchọọ bufee
Oge erugo ịgbanye ụlọ ọrụ gị aka
Daalụ maka isi maka BING, amabeghị m ya ruo ugbu a. Enweela m weebụsaịtị ole na ole, ma na-eche ma ọ ga-ewetara m okporo ụzọ ọzọ. (Enwere m nchịkọta Google na saịtị ndị ahụ, amaghị m ma ọ ga-agwa m ma ọ bụrụ na ọ bụla okporo ụzọ na-abịa site BING.)
M nke abụọ okwu banyere asọmpi nwere ike inyere aka melite ọgụgụ isi nke ọchụchọ, nke yiri ka ọ na-agbagha nke ukwuu n'azụ ihe ga-ekwe omume na teknụzụ.